Hevitra MPANOHARIANA | Febroary 2012
TVM : Efa Fantatra angaha ny tiana omena ny loka?
2012-02-13 @ 01:12 in Spaoro
Mba hoe mandray anjara amin'ilay lalao nokarakarain'ny televizionam-pirenena amin'izao lalao famaranana ny Can 2012 izao [ #afcon2012 sy #Can2012 ny tenifototra be mpampiasa] . Na dia fanontaniana "sampotsampona" aza no re, amin'ny maha-lalao azy dia ny heverina ho tsy ampoizina tokoa ny fanontaniana indrindra fa mba misy loka lazaina fa zaraina.
Atao amin'ny alalan'ny antso finday ny lalao ka mba nihevitra hilalao ny tena. Tsorina aloha fa efa nivonona tamin'izay mety ho fanontaniana rehetra izahay satria nihevitra fa niaraka taminay i Akinator. Diso hevitra ary diso hevitra tanteraka!!! Akinator no miara-dalana aminay ary efa vonona hatramin'ny fikarohana tahirin-kevitra fa ilay olona mandray ny antso kosa, na dia efa tafiditra izao aza! indroa aho ary in-telo ny vadiko ka ny iray aza dia efa nanontany tsara ny vadiko hoe TVM ve izao mandray izay dia eny hoy izy. Avelao ary aho hiditra mivantana fa hamaly ny fanontaniana, andraso vetivety, hoy ilay ranamana somary miroky, fa mbola sahirana. Naharitra telo minitra any ho any mihitsy io resaka io, noho ny fahamehana hamaly angamba fa notapahiny maina fotsiny avy eo. Tena sosotra tanteraka ny vadiko saingy mba nahatsindry ihany.
Izaho koa torak'izany ihany. Nojereko ny fahana lany fa 12 ariary isan-tsegondra ny vola lany... efa tsy latsaka ny in-50 no tratran'ny "messagerie vocale" ary in-droa tafiditra [finday sy fiantso samihafa], tsy voaisa ny nahazo "tonalité libre" fa tsy noraisina, ary tonga dia tapaka avy eo miaraka amin'ny hafatra tamin'ny teny frantsay fa mbola tsy afaka mandray ahy ny olona nantsoiko. Ratsy dia ratsy avy hatrany ny saiko teo anatrehan'izany. Fa maninona no odiana fanina tsotra izao? Dia niara-nieritreritra izahay mivady tamin'ny fandrenesana ireo olona tafiditra ho saika avy any ivelan'Antananarivo hoe tsy natao ho an'ny mponina eto Antananarivo angamba ity lalao ity fa natao ho an'ireo lavitra azy ihany. Fa rehefa izany maninona no tsy nolazaina mialoha?
Ny tsikaritro dia rehefa misy lazaina ho mahazo loka (Antsirabe) na diso aza ny valiny nomeny vao misy Antananarivo ampidirina (tsy tiana hahazo ny loka goavana angamba) ary fanontaniana maromaro no omena azy. Dia lasa koa ny eritreritro hoe mba te-hahazo vola betsaka kokoa ihany koa angamba ny orange madagascar dia atao tratran'ny "messagerie vocale" avokoa ny rehetra, nefa tombatombana izany fa tsy voatery ho marina. Amin'ireny antso fandre amin'ny haino aman-jery ireny dia henonao hatrany fa misy ny olona tafiditra miantso sy miresaka fa ianao tsy tafiditra miantso ohatra fa ny tamin'ity fotoam-pamaranana ity koa malalaka dia malalaka sahala ireny tsy misy miantso ireny ny fotoana ka na izahay saiky tsy hihevitra ny hiantso izany aza lasa niantso fandrao...hay fitaka bevava ilay izy araka ny fijerinay.
Hita ihany koa fa tsy hay loatra izay tena anaran'ny baolina nolalaovina nandritra ity CAN 2012 ity fa raha nanonona ilay olona efa nolazaina hoe tratra aoriana tamin'ny valiny hoe Comoequa no anarany dia namaly ny mpanentana hoe diso raha vao misy Q, dia nihomehy tsiravina ny tena. Hay izany na tafiditra aza dia mety nodisoin-dry zareo ihany. Diso daholo izany ny nosoratan'ireo haino aman-jery an-tserasera tazan'ny maso rehetra. Dia resy lahatra ho azy ny tena fa "tsy milamina kosa ity lalao ampanaovina ny manaraka ny televiziona hijery ny famaranana baolina fandaka ity".
O ry zareo ao amin'ny televiziona malagasy ô! tsy ianareo irery no afaka mampita vaovao fa misy koa ny olon-tsotra afaka mampita izay tsapany sy tsikariny amin'ny alalan'ny fitaovana an-tserasera eo ampelatanany. Teneno rehefa tsy tiana ho azon'Antananarivo ny loka fa manao izay handaniana ny volanay fotsiny ianareo. Soa ihany fa nampientanentana sy nahafinaritra ny lalao famaranana ary nandresy ilay ekipa notohanako ka faly ihany ny tena ary efa saiky najanona ity soratra ity. Saingy, noheverina ho adidin'ny tena ny miampanga ny zavatra tsy mazavazava sy miteny izany. Ajanony ny lalao raha tsy voafehy ny zavatra atao, na ny ratsiratsy kokoa izay ahiahianay, avakavahana ny olona avela ho tafiditra miresaka amin'ny mpanentana sy ho henon'ny besinimaro fa manala baraka ny orinasanareo ianareo.
Dia izay fa nandresy aloha ny ekipa nofidianay e! ooooeeeeeeeeee!!!!!!!
Jentilisa 13 febroary 03:11